राजपा पनि सरकारमा गयो भने मधेश मुद्दा विलिन हुन्छ : सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल (अन्तर्वार्ता )
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल
० अन्ततः राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने नै भयो त ?
— संसदीय दलको नेता चयन गर्ने एउटा नियमित प्रक्रिया हो तर राजपाको मूल कार्यभार भनेको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने हो । संसदीय दल भनेको संसदभित्र मात्रै त्यसको कार्यक्षेत्र हुन्छ र समग्र काम पार्टीको सबै ठाउँमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने हुन्छ । त्यसैले, महाधिवेशन नै हाम्रो मूल कार्यभार हो । संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्नेछ, यो सबैका लागि प्रतिक्षित छ । यो कुरा राजनीतिक समितिमा बारम्बार उठेकै हो । संघीय संसदमा राजपाको १७ जना सदस्य छन्, जसमध्ये एक जना रेशमलाल चौधरी जेलमै हुनुहुन्छ । जनमतले उहाँलाई माननीय बनाइदियो तर यो देशको कानूनको उल्लंघन गरेर सरकार र सरकारका विभिन्न निकायले अहिलेसम्म उहाँलाई शपथ ग्रहणसमेत गराएको छैन । जनमतभन्दा माथि, जनमतको विपक्षमा ती निकायहरू काम गरिरहेका छन् । त्यो दायित्व पनि संसदीय दलको छ । संसदीय दलको निर्वाचन अथवा संसदीय दलको नेता चयन हुनुपर्छ तर त्यसको नाममा भरसक राजपाभित्र कुनै विभाजन आउन दिनु हुँदैन । किनभने राजपाले सबै मिलेर एकजुट होऔं र मधेशका लागि लडौं भन्ने सिद्धान्तलाई स्थापित ग¥यो । तत्कालीन मधेशी मोर्चाका सात राजनीतिक दलमध्ये एक ठाउँमा उभिएर जसरी एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरे, त्यस आदर्शको विपरीत कुनै कार्य गरियो भने जनतासँग विश्वासघात हुन्छ । त्यसैले विभाजनका लागि काम गर्नु हुन्न । यस सन्दर्भमा हाम्रा पार्टीका संयोजक महन्थ ठाकुरजीले भन्नुभएको छ, ‘मलाई नै बनाउनुपर्छ भन्ने जरूरी छैन । तपाइँहरूमध्ये एकजना कोही सर्वसम्मतबाट हुनुस् । तर, विभाजन नल्याउनुस् ।’ यो विभाजन हटाउनलाई हामीले धेरै त्याग गरिसक्यौं । यसै लाइनमा संसदीय दलभित्र ठूलो चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ र विभाजन नभइकन संसदीय दलको चयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अधिकांश साथीहरू सहमत हुनुहुन्छ । महन्थ ठाकुरजीले पद त्याग गरेर मधेशको राजनीतिमा आउनुभयो । राष्ट्रपतिको पद दिँदासमेत त्यो छोडेर उहाँ आउनु भएको हो । उहाँले भन्दै आउनुभएको छ कि सरकारमा पनि नजाने, मन्त्री पनि नबने तर मधेश मिसनमा सहयोग गरिदिनुस् भनेर उहाँले भन्दै आउनुभएको छ ।
० संसदीय दलको नेता चयन गर्न राजपालाई यत्रो सकस किन भएको होला ?
— राजनीतिमा महत्वाकांक्षा त सबैको हुन्छ नि । खासगरी मधेशका दलहरू आन्दोलनबाट आएका हुन् । राजनीतिक संस्कारलाई अभ्यास गर्ने मौका हाम्रा नेताहरूमा धेरै कम छ । त्यसैले नेता कार्यकर्ता सबैमा राजनीतिक संस्कारको कमी छ राजनीतिक प्रशिक्षणको कमीले गर्दा ती संस्कारहरू अगाडि बढेका छैनन् । सबैको चाहना छ, राजनीतिक संस्कार ग्रहण गरौं, तर त्यसका लागि यथेष्ट प्रशिक्षण भएको छैन । त्यसैले, महत्वाकांक्षाले गर्दा अलिअलि सकस देख्या हो तर, विश्वास गर्नुस् निर्वाचनको मितिसम्म पुग्दापुग्दै यो सकस सहजतामा परिणत हुन्छ ।
० तर, राजपाका संयोजक महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोबीच ‘इगो प्रोब्लम’का कारण पनि संसदीय दलको नेता चयनमा ढिलाई भएको भनिन्छ नि ?
— मलाई त्यस्तो ‘इगो प्रोब्लम’ वा टकरावका बारे थाहा छैन । ठाकुरजीलाई संयोजकमा प्रस्ताव गरेको राजेन्द्र महतोले नै हो, त्यसैले इगो टकराव भएको भए उहाँले किन संयोजकमा प्रस्ताव गर्नुहुन्थ्यो । जहाँसम्म महन्थ ठाकुरको व्यक्तित्वको कुरा छ, उहाँ शुद्ध अध्यात्मिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको मनभित्र कुनै किसिमका इगो छँदै छैन । मलाई लाग्छ यो कुरो महन्थ ठाकुरजीले पनि राम्ररी बुझ्नुभएको छ । इगोको टकरावभन्दा पनि आफ्नो महत्वकांक्षा पाउने इच्छाले अलिअलि मतभेदहरू भइरहन्छ । वास्तवममा हाम्रा शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापन भयो, शीर्ष नेताहरू एकजुट भए तर पार्टी एकजुट हुन बाँकी छ । त्यो बाटो महाधिवेशन नै हो । जबसम्म पार्टी एकजुट हुँदैन तबसम्म यस्ता कुराहरू आइरहन्छ ।
० राजपामा संसदीय दलको नेता सर्वसम्मतबाट हुन्छ कि निर्वाचन हुन्छ ?
— सबैको प्रयास सर्वसहमतिबाट नै गर्ने हो । राजेन्द्र महतोजीले पनि त्यहीं कुरा गर्नुभएको छ । हेर्नुस्, प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेको त अन्तिम अस्त्र हो नि । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया गर्दा यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि यसले विभाजन होइन, एकतालाई बढाउँछ । त्यो कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ । तर, राजेन्द्र महतोजीले पनि भरसक सर्वसहमतिबाट हुनुपर्छ भन्ने भावना उहाँको मनमा रहेको कुरा मैले बुझेको छु ।
० खासगरी, नेपालको राजनीतिक परम्परा यस्तो रहिआएको छ कि पार्टीका सुप्रिमो नै संसदीय दलका नेता हुने, यसले गर्दा संयोजक महन्थ ठाकुरजीको सम्भावना त प्रवल छ नि ?
— महन्थ ठाकुरजी निर्विवाद संयोजक हुनुहुन्छ, त्यसमा कहीं कुनै शंका छैन । संसदीय दलको नेतामा हाम्रा सांसदहरू, जसलाई एकताका आधारमा मान्नुहुन्छ उहाँ नै हुनुहुन्छ । अझ फोरमसँग एकताका आधारमा प्रदेश २ मा जनताले संसदमा पठाए । त्यसैले, संयोजक संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा माननीय सांसदहरूको विवेकमा भर पर्छ । ठाकुरजी विवादमा गएर निर्वाचन लड्ने पक्षमा हुनुहुन्न ।
० राजपाको महाधिवेशनको तयारी कस्तो हुँदैछ र कहिले हुन्छ ?
— महाधिवेशनको मिति हामीले तोकिसक्यौं, स्थानका लागि पनि व्यापक छलफल भइसक्यो । स्थानको निर्णय बाहिर आएको छैन । राजविराज, वीरगन्ज र जनकपुरको कुरा भइरहेको छ । मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा केन्द्रमा वीरगन्ज पर्छ र पश्चिमका अधिकांश मानिसहरूको आकांक्षा वीरगन्ज छ । तर, केही साथीहरू जनकपुर प्रदेश २ को राजधानी भएको हुनाले पहिलो महाधिवेशन त्यहाँ गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । कोही राजविराजका लागि पनि भन्दै हुनुहुन्छ । ठाउँको निर्णय एक÷दुई दिनभित्र नै भइहाल्छ । विधानलाई महाधिवेशनसम्म पु¥याउन हामीले अन्तिम रूप दिएर अध्यक्षमण्डलमा दिइसकेका छौं । साउनको दोस्रो हप्ताको प्रारम्भदेखि हामी सदस्यता अभियानमा लाग्छौं । अहिले वर्षात्को मौसम छ, धेरै ठाउँ बाधित छन्, सबै ठाउँमा पुग्न सकेका छैनौं । त्यसैले साउनको दोस्रो हप्तापछि बाटोघाटो सजिलो भएपछि हाम्रो महाधिवेशनको पहिलो चरण प्रारम्भ हुन्छ । हाम्रो अधिवेशनलाई लिएर जनतामा साह्रै उत्साह छ । राजपा अब व्यवहारिक रूपमा एक हुन लागेको छ । राजपाको एकताले नै ठूलो परिवर्तन ल्याएको थियो । दुर्भाग्यवश प्रदेश १, ५ र ७ मा चुनाव लड्न पाएनौं । तर, प्रदेश २ मा त्यसको ठूलो उपलब्धि पाएका छौं । त्यो भावनालाई कायम राख्न अब तल्लो स्तरसम्म पनि एकतालाई सार्थक बनाउन गृहकार्यमा लागेका छौं ।
० तपार्इँहरूले समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्नुको कारण के त ?
— हामी असारमा पार्टी दर्ता गरायौं, त्यसपछाडि तुरून्त हामी आन्दोलनमा जानुप¥यो, तत्कालीन सरकारले संविधान संशोधन गर्छु भन्दाभन्दै पनि हुन सकेन । त्यसपछि तीन तहको निर्वाचन भयो, त्यसले गर्दा फागुनसम्म सरकार निर्माण लगायतका प्रक्रियामा देश गयो । देश नै अस्तव्यस्त भएको बेलामा निर्वाचनअघि कुनै हालतमा महाधिवेशन सम्भव थिएन । निर्वाचनका प्रक्रियाहरू सम्पन्न भएपश्चात् हामी निरन्तर अब महाधिवेशनमा जाने कुरा गर्दागर्दै अहिले यसको निर्णय भइसकेको छ । समय तालिका र कार्यतालिका तोकिसकिएको छ, तर बाहिर आउन बाँकी छ । यो अगाडि विभिन्न कारणले गर्दा सम्भव थिएन ।
० अब महाधिवेशनबाट राजपामा अध्यक्षमण्डल नै रहन्छ कि एकल नेतृत्व आउँछ ?
— एकल नेतृत्वको कुरा त स्वतः अध्यक्षमण्डलले नै स्वीकार गरिसकेको छ । छ वटा टाउको एक ठाउँमा राख्नु र सबैको मतैक्यता गराउनु यो बहुत गाह्रो काम रहेको छ । अरूले पनि पहिला–पहिला कोशिस गरेका थिएन कसैले सकेन । मतभिन्नता हुन्छ र त्यो मतभिन्नताबाट मतैक्यता खोज्नुपर्छ । त्यसैले हामी छ वटा दल मिलेर पनि निर्णय प्रक्रिया ढिला भएर यही मतैक्यता पद्धति राजपाले अहिलेसम्म पालना गरिरहेको छ, त्यसले बाधा गर्दै आएको छ । त्यसैले यो पद्धति छोड्नै पर्छ । यसमा अध्यक्षमण्डल पनि सहमत भइसकेको छ । त्यसैले अब एकल नेतृत्व आउँछ । तर, एकल नेतृत्वसँगै ‘टीम वर्क’ अर्थात् नजिकको निगरानी हाम्रा नेताहरूबाट हुनुपर्छ । सबैको सुझावअनुसार एकल नेतृत्व हिंड्नुपर्छ ।
० महाधिवेशनपछि राजपाको रणनीति के हुनेछ ?
— राजपाका लागि अहिलेको परिस्थिति हिजोभन्दा फरक भएको छ । देशमा वामपन्थीको सरकार, अधिकांश वाम शक्ति एकत्रित भएका छन् । अहिलेको जुन परिस्थितिअनुसार दुई तिहाइको बहुमतले देशमा स्थायित्व ल्याउँछ भन्ने सबैलाई विश्वास थियो । यसले लोकतन्त्रलाई प्रहार गर्ला लगायतका शंका उपशंकाहरू थिए, तर एउटा के कुरामा जनता आश्वस्त थिए भने दुई तिहाइ बहुमतले स्थायित्व दिन्छ र स्थायित्वले शान्ति र समृद्धि दिन्छ । तर, दुर्भाग्य के छ भने अहिलेको अभ्यासले के देखियो भने दुई तिहाइ बहुमतले मात्रै स्थायित्व आउँदैन । त्यो सँगसँगै स्पष्ट राजनीतिक सोच र त्यसअनुरूपको राजनीतिक आचरण हुनुपर्छ, जुन अहिले देखिएको छैन । अहिले नयाँ–नयाँ द्वन्द्वहरू सिर्जना भइरहेका छन् । हाम्रो मधेशका द्वन्द्व त यथास्थितिमा छ, त्यतिकै हामी थाँति राखेका छौं । हामी समृद्धिमा बाधक नबनिकन त्यसलाई प्राप्त गर्न खोजिरहेका छौं । अन्तिम समयसम्म हामी प्रयासरत रहन्छौं । फेरि द्वन्द्वमा जानअगाडि हामीले सरकारलाई प्रशस्त मात्रामा मौका दिइरहेका छौं । तर, सरकारले चाहन्छ कि चाहँदैन त्यो कुरा आउने दिनले देखाउँछ । त्यसैले अब यो परिप्रेक्ष्यमा आगामी दिन सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, हाम्रा मुद्दाहरू कसरी सम्बोधन गर्छ र समृद्धि र विकासको कुरा मधेशलाई कतिको फलदायी हुन्छ, यी सारा कुरा हामीले हेर्न बाँकी छ । महाधिवेशनमा अबको राजनीतिक दिशा के भन्ने यो भारी छलफलको विषय हो । यसको छिनोफानो गर्नका लागि नै महाधिवेन एउटा मूल बाटो हुन्छ । हामीले एउटा राजनीतिक दस्तावेज तयार पार्छौं, त्यसमाथि छलफल गर्छौं र त्यसले दिशानिर्देश गरेअनुसार अगाडि बढ्छौं ।
० तपाइँहरू सँगै हिंडेका र मधेशको मुद्दामा एकमत रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सत्तामा छ र तपाइँहरू बाहिर हुनुहुन्छ, यसले गर्दा मधेशको मुद्दा कमजोर त भएको छैन ?
— मुद्दा त निश्चित रूपमा कमजोर भएको हो । आन्दोलनमा पनि हामी सँगै हुन सकेनौं, एकतामा पनि हामी सँगै हुन सकेनौं तर हामीले जनताको भावनाअनुसार एकता गर्न नसके पनि सहकार्य गरेर प्रदेश २ मा चुनाव लड्यौं र त्यसको परिणाम सकारात्मक नै रह्यो । निश्चित रूपमा हामीसँग कुनै सरसल्लाह गरेर फोरम सरकारमा गएको होइन, आफ्नो हिसाबले गएको हो । मुद्दा त कमजोर भएको छ तर हामी पनि सरकारमा गयौं भने मुद्दा कमजोर मात्रै होइन, विलिन हुन्छ । त्यसैले गर्दा मुद्दाको बारेमा झुक्याउने किसिमको कुनै सहमति गरेर होइन, स्पष्टरूपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सरकार र राजपाको बीचमा स्पष्ट नभइकन राजपा सरकारमा जाने विचार गर्दैन । सरकारले पहिलो चरणमा हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएको झुठा मुद्दाहरू फिर्ता गर्नुपर्ने, रेशमलाल चौधरी लगायतलाई रिहा गर्ने र हाम्रा संशोधनका मुद्दाहरूमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण कसरी र कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुराको विषयमा एक राउण्ड संयोजक ठाकुरजीसँग र नेताहरूसँग कुराकानी भइसकेको छ । चाँडै अर्को राउण्डको कुराकानी पनि हुन्छ र यो बारेमा हामी स्पष्ट भएपछि हामीले नयाँ बाटोतिर लाग्छौं ।
० भनेपछि, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले जनतालाई झुक्याउने काम गरेको हो ?
— यो त उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो, जनताले त बुझि नै रहेका छन् । उहाँहरूले सरकारमा गएर काम पूरा गर्छौं भनेर भन्नुभएको छ, सरकारमा गएर उहाँहरू कतिवटा मुद्दा फिर्ता गराउनुभएको छ, कतिवटाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको छ ती कुराहरू त बाहिर आएको छैन । क्याबिनेटभित्र बसेर उहाँहरू के गरिरहनु भएको छ, त्यो कुरो थाहा नपाइकन झुक्याएको हो वा के गरेको हो थाहा हुँदैन । तर, सबभन्दा राम्रो के हुन्थ्यो भने हामी सरसल्लाह गरेर सरकारमा जाने वा नजानेबारे निर्णय लिएको भए सरकारमाथि यथेष्ट दबाब पथ्र्यो र एउटा सही निर्णय हामीले लिन सक्थ्यौं ।
० अहिले नेपाली कांग्रेस कमजोर प्रतिपक्षीको रूपमा देखिएको छ, राजपा र कांग्रेस मिलेर दह्रो प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने सम्भावना छ ?
— नेपाली कांग्रेस पहिलेभन्दा अहिले साह्रै अव्यवस्थित रूपमा छ, चाहे त्यो संसदीय दलमा होस् वा पार्टीको रूपमा होस् । कांग्रेसभित्र गुटउपगुटभन्दा पनि गिरोहहरू सक्रिय छन् भनेर कांग्रेसकै नेताहरूले भन्दैछन् । त्यसैले जबसम्म कांग्रेसको आन्तरिक व्यवस्थापन भरपर्दो हुँदैन तबसम्म हामी सहयात्रा गर्ने स्थितिमा छैनौं । आन्तरिक व्यवस्थापन भएपछि कांग्रेसले इमान्दारीपूर्वक मधेशको मुद्दा र जनताका समस्याहरू लिनसक्ने स्थितिमा आफूलाई पु¥याउँछ भने मात्र कुनै किसिमको सहकार्यको बारेमा हामीले सोच बनाउन सक्छौं । तत्काल त्यो स्थिति छैन । कांग्रेसले आफूलाई व्यवस्थित गराउने प्रक्रियामा छ भन्ने देखिएको छ । तर, त्यसका लागि कति समय लाग्छ, सक्छ कि सक्दैन कि बीचैमा भंग हुन्छ आदि इत्यादिका सम्भावनाहरू त्यतिकै देखिएका छन् । त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा तत्कालै हामी बलियो प्रतिपक्षको रूपमा सहकार्य गर्ने स्थितिमा छैनौं । अहिले हामी न कांग्रेससँग टाँसिएका छौं न नेकपासँग टाँसिएका छौं । हामी अहिले बीचको भूमिकामा छौं जसले हाम्रा मुद्दाहरूप्रति सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, उसँग सहकार्य गर्छौं । संविधान संशोधनका लागि हामीले नेकपामाथि नै भर पर्नुपर्छ । किनभने संख्या दुई तिहाइ चाहिन्छ, त्यसमा हामीले कांग्रेसको पनि सहयोग खोज्छौं ।